Ukunquma imikhiqizo emisha, izinsizakalo noma izici | Martech Zone
Ukunquma imikhiqizo emisha, izinsizakalo noma izici
NgoMgqibelo, July 12, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuleli sonto ngithole I-Tuned In kusukela Ukumaketha kwePragmatic.
Cishe sengiyingxenye yesithathu yencwadi manje futhi ngiyayijabulela. Kunezibonelo eziningi zezandla zokuthi ama-hubris ebhizinisi abaholele kanjani phansi kwezinqumo ezingezinhle ngoba bengazange 'Bangene ngaphakathi' kumathemba abo. Ngokungazi ukuthi amathemba abo adingani, izinkampani zazethula imikhiqizo, izinsizakalo noma izici ezazinuka kabi.
Ngokufika kwemithombo yezokuxhumana kanye newebhu, ngicabanga ukuthi kukhona ibhalansi lapho uthatha isinqumo ngemikhiqizo emisha, izinsizakalo, noma izici, noma kunjalo, ezedlula lokho okulindelwe. Manje njengoba ikhasimende liyindlela yokuthengisa eqinile, kuzodingeka ubanake futhi. Incwadi ikukhuthaze lokhu okuthunyelwe.
Nansi indlela engiyenzayo yokunquma okubalulekile kwemikhiqizo emisha, izinsizakalo noma izici lapho ngisebenza khona:
Yini okunamathelayo? Ngamanye amagama, yini engiyithuthukisayo ezothuthukisa ukugcinwa kwamakhasimende? Uma ungumthengisi we-SaaS, ngokwesibonelo, unayo i-API? Ama-API amnandi ngoba adinga ikhodi encane, ukuxhaswa okuncane, futhi adinga utshalomali lwangaphakathi olwenziwe yikhasimende lakho ukuhlanganisa nomkhiqizo wakho.
Yini ezwayo? Eminye imikhiqizo, izinsizakalo, noma izici kufanele isisindo sazo ngenxa yethonya abazoba nalo embonini. Isibonelo esisodwa esihle salokhu uku-oda ngeselula izindawo zokudlela. Ngenkathi izindawo ezinkulu ze-pizza zisathola kuphela u-10% wokuthengisa kwabo ku-inthanethi, manje sebetshale imali kuselula.
Ukutshalwa kwemali kungahle kube yilahleko yebhizinisi ngoba ulwazi lomsebenzisi ngocingo lumunca. Kodwa-ke, bekufanele bagijimise ukuthengisa ngesisombululo ukuze bathole i-hype. I- hype entsha ngamawijethi.
ISidenote: Ngiyakholelwa ukuthi uku-oda ngeselula namawijethi kuzoba nosuku lwazo - kepha kuzokwakhiwa kabusha ngokuphelele ngokuhamba kwesikhathi njengoba ubuchwepheshe buthuthuka. Lawa mabhizinisi atshale kulezi manje ngenxa yokubhonga nebhizinisi elingaqondile - hhayi imiphumela yebhizinisi eqondile.
Kuyini OWESIFAZANE-kufanele? Amakhasimende akho ahlela ukuvula nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Abasebenzi bavame ukunamathela ezimbonini kodwa bathuthele ezinkampanini ezahlukene. Lokho kusho ukuthi ukumaketha kweWord Of Mouth kubalulekile futhi ibhizinisi lakho kumele likubheke njengethuba. Uma udala umkhiqizo, insizakalo noma isici amakhasimende akho adlula kuwo ubhanana, ukholwa kangcono ukuthi batshela abanye abantu embonini ngakho!
Yini Okuthengiswayo? Lokhu ikakhulukazi kungumbono walokho engikufundile kuze kube manje I-Tuned In. Lesi yisici esikhulu ekukhuliseni ibhizinisi lakho - umkhiqizo wakho, insizakalo noma isici kufanele sigcwalise ibhizinisi kudingeka. Ngamanye amagama, ngokuthenga umkhiqizo wakho - inzuzo ebhizinisini lami idlula izindleko. Uma kungekho sidingo lapho, mhlawumbe ngeke uphumelele. Ukuthengisela ama-Eskimo iqhwa kuyinsumansumane kuphela.
Noma yiziphi zalezi zici zingahle zithathe enye. Ngezinye izikhathi, sithuthukise izici ezintsha ngokumane sithole amathemba amakhulu kakhulu. Kwakuwukugembula, kepha sabona ukuthi utshalomali luzokhokha noma ngabe asizange sibambe lelo khasimende. Ngikholwa ukuthi umgwaqo omkhulu kufanele ube nazo zozine lezi zinhlelo kuwo.
Tags: Izinyathelo ezi-6 zokumaketha okungenayoukwenziwa kokuqukethweukwesekwa kwamakhasimendedesign infographicsnokwenza kahle kwezwengokwezwe lokhoinqubo yokumaketha engenayoukuhola ukukhulisaukwenziwa kwendawoUkumaketha kwePragmatic
Bheka le Call to Action!
I-WordPress iguquka ibe yi-CMS Powerhouse